अभागी माझघरे | मझेरी डट कम
kbs — Mon, 11/30/2009 - 19:28
मेरो संसार (ब्लग)
छेत्रीगाउँ भएर होला दिनहुँ चर्चा हुन्थ्यो खसीको। धार्नीको ८ सय पुगिसकेकाले किनेर खान असम्भव नै थियो गाउँलेहरुलाई। कि त आँफैंले पाल्नु पर्‍यो हैन भने थुक निल्दै बस्नु सिवाय अरु उपाय नै थिएन। त्यही भएर बडेमानको घोर्ले खसी फिर्ता पाएकोमा दङ्ग थिए माझघरेका सन्तान। सबजना भनिरहेका थिए – “माझघरे तिमीहरुलाई बधाई छ खसी फिर्ता पाएकोमा”।
“सानु दु:ख गर्नु परेन खोसेर ल्याउन। सापटी लिएको रकममा मिलाउँला भन्दै दशैंमा खाउँला भनेर जोगाएको खसी आफ्नै पुर्खौली सम्पत्ति झै गरेर टाट्नु खाली पार्दै लगेको थियो बजिया महाजन भनाउँदोले। धन्न सवै गएर पाखुरा सुर्केपछि तर्सियो र फिर्ता दियो” – माझघरे र उनका सन्तान मुसुमुसु हाँस्दै जवाफ फर्काउँथे। छन पनि मूलघरमा राखेको त्यो लाम्काने खसी एकदमै गजबको थियो ।
चार धुर छन् माझघरेहरुका – ३ लक्का जवान छोराका घर, अनि बूढावुढी बस्ने मूलघर। जेठा छोराका २ छोराछोरी छन् । माईला र कान्छा विवाहित भएपनि छोराछोरी भने भै सकेका छैनन् ।
समय बित्दै दशैं लागेको थियो। माझघरेका सन्तानलाई यो दशैं निकै उत्साहजनक लागिरहेको थियो किनकी साथमा घोर्लै खसी थियो। सप्तमीको दिन नै खसीकाट्ने निर्णय गरे माझघरेहरुले। माझघरे बूढा दाउरा ठोस्दै पुरानो तामाको खट्कुलोमा पानी उमाल्दै थिए। एक्कासी आँगनको होहल्ला सुनेर बूढा वाहिर निस्कीए। हात हालाहालको स्थितिमा पुगिसकेछन् छोराहरु। खसी काट्न उद्याएर तैयार पारेको खुकुरी लिएर घम्साघम्सी पो गर्न खोज्दै रहेछन् ।
बूढाले कुरा बुझ्दै गए । ‘कसले कति धार्नी’ भन्ने कुरा नमिले पछि सुरु भएको रहेछ झगडा। जेठो छोरो भन्दै थियो- “हिसाब साधारण छ भाइ हो । खसी काटौं । जति मान्छे उति भाग लगाऔं । अनि जसका घरमा जति छन् उति भाग लिने, हिड्ने। कस्तो कुरा नबुझेका तिमीहरुले” । माईला र कान्छाले असहमति जाहेर गर्दै थिए। उनीहरु भन्दै थिए- “कस्तो वाठो तिमी । ७ बर्षकी तिम्री छोरी र ५ वर्षको तिम्रो छोरो पनि हामी बराबरका भए हैन त ? क्या गजबको कुरा । उनीहरुलाई भाग लगाउनु हु्न्न। तिनीहरु त तिम्रा भागखाने मान्छे हुन् न कि तिनीहरु छुट्टै भाग लिने हैसियत राख्ने मान्छेहरु । भाग त के एक चोक्टा पनि तिनीहरुको लागि छुट्याउनु हुन्न। खसिलाई चार बराबर भाग लाउने हो, र हरेक घरले एकएक भाग लिने हिड्ने हो। यो त अति साधारण हिसाब हो”। कान्छा र माइलाको कुरालाई उनीहरुका वुहारीहरुले पनि जोडदार रुपमा समर्थन गरेका देखिन्थे।
झगडा धेरै वेरको चल्यो । बूढाले साफ गाली गरे छोराहरुलाई। केहीवेर पछि झगडा मथ्थर त भयो तर भागबन्डाको कुरो मिलेन। बूढाले आगो निभाए। “भोलि काटौला खसी, अष्टमी पनि हो”- बूढाले जिम्लिएको पानी जुठेल्नामा पोख्दै भने। चि-चि लिन गएका माझघरेका नाति-नातिना निरास हुँदै घर फर्के।
“आज अष्टमीको दिन जसरी पनि काट्नु पर्छ खसी, तिमीहरु जसरी पनि कुरो मिलाओ। भोलिवाट मारहान्न मिल्दैन”- भोलिपल्ट जम्मा भएका छोराहरुमाझ माझघरे बूढा भन्दै थिए। कुरा मिल्ला झै भैरहेको थियो। यसैवीच माझघरेकी जेठी वुहारी गाउँ थर्काउने गरी कराई – “ए हर्केका वाउ, हर्केका वाउ, घर आऊन एकछिन, धामीबूढा आका छन्”। जेठो छोरो विचैमा हिड्यो धामी बूढा भेट्न।
करिब एक घन्टामा फर्कियो जेठो। छलफल फेरी सुरु भयो। जेठोले अड्डि कस्यो- “मेरा छोराछोरी छन् । त्यसैले अरु भाइहरुले भन्दा मैंले बढी पाउँनै पर्छ। खसी समानुपातिक हिसाबले वाँढिनुपर्छ”। धामिबूढाले जेठोलाई उक्काएकी के हो, अघि मिल्न लागेको कुरो मिल्दै मिलेन। बराबर भाग लगाए यो दशैंमा खसी नै नखाने र काट्न नदिने सुरमा कस्सियो उ। माहिलो र कान्छो चार बराबर भाग लगाउनु पर्छ भन्ने कुरा मै अडिग रहे।
माझघरे बूढाले मध्यमार्गी वाटो अपनाउने विचार गरे र वुढीलाई एक नजरको ईसारा दिए । वुढीले सुरु गरिन-”हेर, भाग लगाउने कुरा छोड। सवै मासु मूलघरमा राखौं। म पकाउँछु सवैको लागि । अनि मासु नसकिउन्जेल यही खाँउला सवै जना अनि दशैं मनाउँला”। माईलो कस्सियो – “जेठो छोरो वाउको, कान्छो छोरो आमाको । माईलो न वाउको न आमाको । म मान्दिन यो कुरा”। कान्छोले पनि यो प्रस्तावलाई त्यति रुचाएन । कुरा फेरि मिलेन ।
अष्टमीको दिन पनि कुरा नमिलेको देखेर छोराहरुलाई माझघरेले भने: “दशैंमा मासुखानै पर्छ भन्ने के छ र? छोरीपनि आउँछे तिहारमा। तिमीहरु पनि कुरा मिलाओ त्यो बेलासम्म” । यसरी बूढाले तिहारसम्मका लागि खसी नकाट्ने निर्णय सुनाए।
घरमा घोर्ले खसी भएपनि दशैंमा माझघरेका सन्तानले घुटुघुटु थुकनिल्दै विताए। “तिहारमा बहिनी आएपछि मात्रै काट्ने सल्लाह भयो” – गाउँलेहरुलाई घरझगडा लुकाउँदै माझघरेका सन्तान भन्ने गर्थे।
कोजाग्रत पूर्णिमाको रात माझघरेका सन्तानले गाउँ थर्काए। पूर्णिमाको रात भएपनि आकाश भरी डम्म कालो बादल लागेको हुनाले रात अन्धकारमय नै थियो। गाउँलेहरु होहल्ला गर्दै राँको लिएर माझघरेका बस्ती तर्फलागे जहाँ माझघरेका सन्तानहरु पुर्पुरोमा हात राख्दै बाघले सिध्याएको घोर्ले खसी सम्झिँदै विलाप गर्दै थिए। भागबन्डाको कुरा नमिल्दा नकाटिएको घोर्लेखसी गुमाउँदा पनि माझघरेका सन्तान आ-आफ्ना गल्ती स्वीकार गर्न तैयार थिएनन् बरु अझैपनि एक अर्कामाथि आरोप थोपरिरहेका देखिन्थे। गाउँलेहरु अभागी नसुध्रिएका माझघरे देखेर वाक्क दिक्क भए झै देखिन्थे। उता धामी बूढा भने माझघरेका कुलदेउता बिग्रेको कुरा बर्वराउँदै थिए।
बिना बिहे आमा बन्न
कुशे औंसीमा सम्झिए
आखिर सबै संसार मास्ने हुन्छन्
प्रेम र मेरी उनी
शिक्षक साहित्य - माष्टर दाजुको आइडिया
तिम्रो रुपमा भुतुक्क भै
म ढलें बेहोसमा ढलें
द्रोण र द्रुपदको बालप्रेम र....